I-Valve: izindaba ezihamba phambili ezithokozisayo ... | Kusuka kuLinux
Usukhuphukile izindaba eziningana ezithakazelisayo ezungeze i-Valve. Abanye benu bazothanda bonke abadlali abasebenzisa isitolo segeyimu yevidiyo eku-inthanethi kanye neklayenti le-Steam lale nkampani. Okokuqala, i-ACO shadow compiler ye-AMD GPU ihlanganiswe neMESA. Ngokuqondile, izotholakala ku-Mesa 19.3. Inhloso yalo mhlanganisi kwakungukukhiqiza ikhodi yomdlalo eyenzelwe ngokwengeziwe nokusheshisa ukuhlanganiswa. Lokho kuzohumushela ku-FPS engcono nasekuphakameni okungcono kwemidlalo yevidiyo.
Ngakolunye uhlangothi, uma ukhumbula, iValve yethule i- "laboratory" lapho bengabeka khona izivivinyo zabo abazozihlola bese bezihlanganisa nemikhiqizo yabo. Amalebhu Womphunga, njengoba ibizwa kanjalo, manje inezilingo eziningi. Kunamathuluzi amabili abizwa ngeDeep Dive nelinye lezincomo ezivela emphakathini. Ngeyokuqala, ungahlunga okuqukethwe ku-Steam, futhi uma ukhethe i-Linux kokuncamelayo, kuzoyeka ukukhombisa okuqukethwe kwamanye amapulatifomu. Ngokuqondene nethuluzi lesibili, kuthatha iziphakamiso zabasebenzisi ukuze zibaluleke ngaphakathi konjiniyela begeyimu yevidiyo.
Lokho entweni eyodwa, kepha mhlawumbe izindaba ezithakazelisa kakhulu yilokho inkantolo yezobulungiswa yaseFrance ekulinganisile. Futhi basola ukuthi amakhasimende esitolo se-Steam video game kufanele akwazi ukuthengisa kabusha imidlalo ayithengile kwabanye abantu ngaphandle kokufuna. Lokho kunengqondo, ngoba lapho uthenga okuthile ku-Steam, njenganoma ikuphi okunye ukuthengwa kwanoma imuphi umkhiqizo, kufanele ukwazi ukuwuthengisa kabusha uma ungasafuni. Njengoba nje ungenza ngendwangu yefenisha, okokusebenza, izingubo zakho, njll.
Uma bengahambisani, Ivelufa kufanele likhokhe inhlawulo enkulu. Kubukeka sengathi iValve ifuna ukufaka isikhalazo ngalokhu, ngoba ifaka ukulahleka okuphawuleka kakhulu. Kepha kuzodingeka ukubona ukuthi bayawina yini noma cha. Ngaphezu kwalokho, lesi sinqumo singabeka izisekelo zamanye amazwe ngaphakathi nangaphandle kweYurophu ukuthi enze okufanayo. Hhayi ngeValve kuphela, kepha nangezinye izitolo eziku-inthanethi nezinye izinsiza ezifanayo ezifana ne-GOG, Humble, njll. Kuyiqiniso ukuthi lolu hlobo lwemikhiqizo yedijithali, kuze kufike lesi sigwebo, bekungekho ndlela yokuyithengisa kabusha ukuze ibuyise imali uma ungasayisebenzisi ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » I-Valve: izindaba ezihamba phambili ezithokozisayo ...
Nginentshisekelo odabeni lokuthengisa kabusha, ngoba aluthinti kuphela imidlalo yevidiyo, kepha futhi nama-movie nochungechunge olidijithali.
Ngakolunye uhlangothi, bengikuqonda ukuthi nge-steam awuthenganga umdlalo noma ikhophi yawo, kodwa ilayisense yomsebenzisi.